FAQ - ondry Anti-havizanana Mat Co., Ltd.
Inona no atao hoe AHome?
AHOME no Shina voalohany sy mandalo ihany Alemana (TUV) tamin'ny taona nitarika mpanamboatra taratasy fanamarinana fenitra sy ny mpanondrana ny anti-havizanana mats.
Ahoana no be dia AHome?
153 mpiara-miasa tanteraka, 20 matihanina R & D ekipa, 5 ambony injeniera sy 20 varotra olona. 90% ny vokatra dia namidy tamin'ny firenena 50 mahery sy ny faritra toy ny Amerika, Japana, Korea Atsimo, Kanada, Eoropa, Amerika Atsimo, Aostralia, sy ny maro hafa.
Inona no fototra hasarobidin'ny AHome?
AHome mandany isam-bolana ny vokatra vaovao, indrindra fa tsy fisaka eo birao mats, Standard eo birao mats ary namelatra ny entana tsy tapaka tsara ny olona rehetra, fo mpanjifa rehetra. "Create mahomby fampiononana" anisan'ny marika AHome feno.
Inona avy ireo vokatra lehibe AHome?
AHome dia misahana manokana ny orinasa mpamokatra entana, sy ny R & barotra D ny tsy fisaka & fisaka eo birao mats, lakozia fampiononana mats, fitsaboana fandriana, fandidiana rihana mats sy mpanety mats sy ny sisa.
Inona no vokatra azo ampiasaina AHome & ampiharina?
Anti - fatigue mats efa voaporofo ny hampitombo ny vokatra sy hampihena ny indray, sy ny lohalika vozony ratra sy ny fanaintainana. Fampiharana-Industrial, Varotra, Home, vahiny, Mail Rooms, tranombarotra, Faritra mando, sns
Featured Products - Hot Tags - Sitemap.xml - DIEM Mobile
Pvc Anti Fatigue Mat, Leather Desk Mat, Office Anti Fatigue Mat, Anti Fatigue Mat Kitchen Floor, Birao Anti-Mat havizanana, Ergonomic Office Floor Mat,